क्यान्सर अस्पतालको क्यास काउन्टर | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
क्यान्सर अस्पतालको क्यास काउन्टर
भरतपुरमा रहेको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको चर्चा सकारात्मक रुपमा भन्दा नकारात्मक रुपमा धेरै हुने गरेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने नकारात्मकताको बिम्ब बनेको छ, यो अस्पताल । क्यान्सरजस्तो विकराल रोगको उपचार हुने नेपालको एक विशिष्ट अस्पताल हो यो । तर, यसको साख जोगिन सकेको छैन । दिन प्रतिदिन यसको विश्वसनीयता धरापमा पर्दैछ । अस्पतालमा इमानदार चिकित्सक, प्राविधिक, कर्मचारी अवश्य होलान् । तर खै किन हो, चुस्त हुन सकेन यो अस्पताल ।
सेवाग्राहीका रुपमा यो अस्पतालमा लगभग तीन घन्टा बिताउँदा त म दिक्क भए । यहाँ उपचार सुरू भएपछि वर्र्षौ आवतजावत गर्नुपर्छ रे । उनीहरुको अवस्था झनै के–कस्तो होला ? पुस १ गते बिहान मेरो भाइको सामान्य अप्रेसन थियो अस्पतालमा । अलि दिनअघि चिकित्सकलाई भेट्दा केही परीक्षणहरु गर्न लगाए । त्यो रिपोर्ट लिएर पुस १ गते मंगलबार आउनू भनेका थिए । भाइ बुटवलबाट आउनु पर्ने थियो । सामान्य अप्रेसन भएकाले भाइको उसैदिन फर्कने तयारी थियो । कार्यालय समयमा अस्पताल पुगेपछि परीक्षण रिपोर्टहरु समयमै पाइयो । चिकित्सक पनि सजिलै भेटिए । १२ बजे अप्रेसन हुने जानकारी दिएर किन्नुपर्ने सामानको विवरण लेखेको पर्चा थमाइदिए ।
केही सामानहरु अप्रेसन गर्दा नै चाहिने थियो । हामी पहिला सामान्य अप्रेसनको शुल्क बुझाउन अस्पतालको क्यास काउन्टरमा लाम लाग्यौँ । त्यहाँ मान्छेको भीडभाड अत्यधिक थियो । लाम बस्दै जाँदा जब पैसा तिर्ने समय आयो, तब क्यास काउन्टरको कम्प्युटरले काम गरेन । काउन्टरमा पैसा बुझ्नेहरु तीन–चार जना हुँदा हुन् । सबैका अगाडि लामो लाइन थियो । सेवाग्राही सबैलाई हतार नै थियो । पैसा तिर्ने हाम्रो पालो आउनै लाग्दा पनि काउन्टरका अरुसँग समन्वय गरेर पैसा बुझाउन सकिएन । हामी उभिएको काउन्टरको कम्प्युटर कतिबेला बन्ला भनेर कुरेर बसियो ।
कम्प्युटर बनाउन मान्छे आए पनि केही समयपछि कम्प्युटर चालू भयो । हामी लाइन बस्दा काउन्टरमा महिला कर्मचारी थिइन् । कम्प्युटर बिग्रेपछि महिला कर्मचारीको ठाउँमा पुरूष कर्मचारीले काम सम्हाले । सामान्य अप्रेसनको शुल्क पनि सामान्य नै रहेछ, जम्मा तीन सय रूपैयाँ । हामीले पाँच सय रूपैयाँ दियौँ । ‘खै खुजुरा ? खुजुरा चाहियो’, काउन्टरका कर्मचारी हामीसँग अलि झर्किए । हामीले खल्तीमा खुजुरा खोज्यौँ, नभेटिएपछि रहेनछ भन्यौँ । लाइनमा बसेकाहरुसँग पनि छ कि भनेर सोध्यौँ, नभएकै जानकारी पाइयो । हामीले औषधि किन्नु पनि थियो । कर्मचारीले औषधि किनेर खुजुरा बनाएर ल्याउनू भने । हामी औषधि किन्न गइयो, तर त्यहाँ पनि खुजुरा बनाउन सकिएन ।
हामी अब के उपाय हुन्छ भनेर काउन्टरमा आयौँ । काउन्टरका कर्मचारी खुजुरामा नै अल्झिए । यति गर्दा हाम्रो अप्रेसनको समय हुन लागेको थियो । डाक्टरले लेखिदिएका कागजपत्रहरु र यहाँसम्म कि प्याथोलोजीको रिपोर्टसम्म पनि काउन्टरमा कर्मचारीकै जिम्मामा थियो । खुजुरा नभएपछि हामीले ती कागजपत्र नपाउने भयौँ । हामीले ‘अप्रेसनको बेला भयो, अब खुजुरा खोज्दै कता–कता चाहर्ने ? कागजपत्र दिनुहोस् र पैसा पनि राख्नुहोस्, बरू बिलको पछाडि दुई सय रूपैयाँ फिर्ता भनेर लेख्नुहोस्’ भन्दा पनि ती कर्मचारीले मानेनन् । ‘अप्रेसनमा जाने हो भने यो लगेर गए हुन्छ’ भनेर बिल थमाए ।
चिकित्सकले अप्रेसनका लागि बोलाए । हामीले बिलमात्रै देखायौँ । यसले त हुँदैन, अरु कागज चाहिन्छ भने । फेरि काउन्टरमा गएर ‘भएन’ भनियो, उनले प्याथोलोजीको रिपोर्ट थमाइदिए । त्यो रिपोर्ट मात्रैले पनि हुँदैन, पूरै ओपिडी कार्ड ल्याएर आउनुहोस् भने चिकित्सकले ।
यो बेला हामीलाई निक्कै रिस उठ्यो । यता मान्छे अप्रेसन कक्षमा जानु परेको छ, उता क्यास काउन्टर आवश्यक कागजहरु पनि अँठ्याएर बस्छ । अझ, त्यो पनि दुई सय रूपैयाँ नफर्काउन सकेका कारण । ‘डाक्टरले भएको जति सबै कार्ड माग्ने, तपाईं भने पु¥याइ–पु¥याइ दिने ? के हो यस्तो तरिका ? कति दुख्ख दिन खोजेको हो’, काउन्टरका कर्मचारीसँग कुरा राखेँ । उनी अझै ‘दुई सय रूपैयाँ दिनुस् सबै लैजानुस्, मैले के भनेको छु र’ भन्ने आफ्नै खालको अडानमा छन् । उता, भाइले अप्रेसनका लागि गाउनसमेत लगाएको छ, यता यस्तो हालत छ ।
‘म खुजुरा खोज्न जाँदा अप्रेसन नहुने भयो, आज यतै बस्नुपर्ने भयो । म दुई सय रूपैयाँ तपाईंलाई ल्याएर त दिऊँला रे, तर यहीँ बस्नुपर्दा लाग्ने खर्च बेहोर्ने हो ?’ एकदमै रिस उठेपछि मैले यसो भनेँ । तर, ती कर्मचारी आफ्नै सुरमा थिए, सुनेको नसुन्यै गरे । ‘हैन, किन यतिविधि समस्यामा धकेल्न खोजेको हो ? तपाईं बिलको पछाडि दुई सय रूपैयाँ फिर्ता भनेर लेख्दिनू, नभए उता अप्रेसन रोकिने भयो’, फेरि एकपटक अलि चर्को आवाजमा बोलेपछि ती कर्मचारीले भने, ‘यो कुरा यहाँ होइन, उता भित्र गएर भन्नू ।’ मलाई पनि साह्रै रिस उठेर आएको थियो अनि भनेँ, ‘यो कुरा सुरूमै भनेको भए म भित्र जान्थेँ, अब म भित्र आउन प¥यो भने केके गर्छु–गर्छु । त्यो तहको तनाव भयो मलाई ।’
खै, मैले यसो भन्नु हुन्थ्यो कि नाइँ, तर यति भनेपछि ती कर्मचारीले बल्ल बिल मागेर पछाडि दुई सय लेखेर घेरो लगाए । अनि, च्याठ्ठिँदै कागजपत्रहरु दिए । हतार–हतार गरेर चिकित्सकलाई बुझाइयो । अप्रेसन गरेर निस्केपछि फेरि केही परीक्षणहरु गर्नु थियो । यसका लागि काउन्टर अगाडि उभिइयो । यो बेलामा क्यास काउन्टरमा एउटा होइन, दुईवटा कम्प्युटर बिग्रेर हैरान भएको थियो । लाइनमा बसेका बिरामी र उनीहरुका आफन्तहरु तनावमा थिए । निकै कुरेपछि बल्ल पालो आयो ।
अझ अनौठो त के थियो भने एकाध मान्छे सरासर भित्र गएर बिल काट्दै निस्केका थिए । ‘बाहिर यति लामो समयदेखि पालो बसेका मान्छे छन्, भित्रबाट उनीहरुलाई बिल काट्न पाउने सुविधा कताबाट मिल्यो ? कुरो के हो, जवाफ पाइन्छ कि ? हामीले राखेको प्रश्नमा कर्मचारीले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । हामीले ‘जवाफ पाइँदैन ?’ भनेर दोहो¥याएर सोधियो । ‘पाइँदैन’, कर्मचारी यति भनेर आफ्नो धुनमा लागे ।
अप्रेसनमा जानुअघिका कर्मचारी भने त्यो बेला थिएनन् । यत्रो विशिष्ट अस्पतालको क्यास काउन्टरको हाल यस्तो हुनुपर्ने हो र ? अनि, कर्मचारीको व्यवहार के हो ? खुजुरा दिएन भनेर अप्रेसनका लागि जाने बिरामीको कागजपत्रै नियन्त्रणमा लिने ? यो सामान्य कुरा हो र ? क्यान्सर अस्पतालमा हामीमाथि भएको यो कुरा अरुलाई पनि के–कति भयो वा भएन ? भए पनि यो अरुलाई र क्यान्सर अस्पताल प्रशासनलाई सामान्य नै लाग्यो ?
अस्पतालमा यस्तो भएपछि बिरामी, उनीहरुका आफन्त तनावमा आउँछन् । तनावले बिरामी र चिकित्सकका सम्बन्धमा दरार ल्याउँछ । अस्पताल प्रशासन यस्ता खाले कमजोरीलाई सामान्य भनेर बसेको छ ? क्यास काउन्टरका कम्प्युटर दुरूस्त बनाउने, बिग्रेमा तत्काल बनाउने, नबनेमा वैकल्पिक उपाय गरेर छिटो सेवा दिने विधितर्फ किन नलागेको ? अनि, अस्पतालमा आउने बिरामीसँग कसरी सुमधुर व्यवहार गर्ने भनेर कर्मचारीहरुलाई सामान्य शिष्टता पनि किन नसिकाएको ? खुजुरा नहुँदा बिरामीका कागजपत्र नै कब्जामा राख्दा पनि हुन्छ भनेर कर्मचारीलाई सिकाएको छ, अस्पताल प्रशासनले ?
त्यो दिन अस्पतालमा कुल तीन घन्टा बिताइयो, जसमध्ये लगभग एक–डेढ घन्टा क्यास काउन्टरमा अलमलिनु प¥यो । क्यास काउन्टरको अलमल र दिक्दारीबाहेक अस्पतालको अन्य सेवामा गुनासो गर्ने ठाउँ थिएन । अस्पतालले साँच्ची नै विशिष्ट सेवा दिन्छ । त्यहाँ गर्ने सबैको स्वभाव पनि त्यहीअनुरुपको होस् भन्ने कामना छ ।